AMOLED မျက်နှာပြင်နဲ့ အကြမ်းခံတဲ့ Honor Watch GS Pro ကို ကြေညာ – DigitalTimes
Huawei ရဲ့ Honor Brand က IFA နည်းပညာ ပြပွဲမှာ Watch GS Pro ကို ကြေညာလိုက်ပြီး စစ်တပ်အဆင့် မာကျောတဲ့ စမတ်နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁.၃၉ လက်မ စက်ဝိုင်းပုံ AMOLED မျက်နှာပြင် ၊ Kirin A1 Chip ၊ Bluetooth 5.1 တွေ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အိပ်စက်တာ၊ နှလုံးခုန်တာ၊ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင် ပမာဏနဲ့ သွေးဖိအားတွေကို တိုင်းတာပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေး လိုက်စားသူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
အားကစားနည်း ၁၀၀ မျိုးလောက်ကို တွက်ချက်တိုင်းတာပေးနိုင်တဲ့အတွက် အားကစားသမားတွေအတွက် ရှယ်ပါပဲ။ GPS Outdoor Mode ကို သုံးရင် ဘက်ထရီ သက်တမ်းက ၂၅ ရက်တောင် ခံတာက အရမ်းမိုက်ပါတယ်။
•	1.39-inch ( 454 x 454 pixels) AMOLED touch display
•	HUAWEI Kirin A1 chip
•	Bluetooth 5.1 that connects to Android and above iOS devices, GPS and GLONASS
•	4GB built-in storage for about 500 songs
•	5ATM Water-resistant up to 50 meters
•	Integrated microphone and speaker, Bluetooth calling
•	Heart rate tracking with TruSeen 3.5, TruSleep 2.0 sleep monitoring, SpO2 monitor to track your blood oxygen saturation level
•	Track and control daily activities, including step count, calories burned, and more. Automatically detect and record your workout with voice broadcasts and real-time alerts during six different workouts.
•	Supports over 100 training modes including hiking, mountaineering, open water swimming, pool swimming, free training, triathlon, indoor and outdoor running, indoor and outdoor cycling, mountaineering, elliptical, rower, trail running, skiing and many more
•	MIL-STD 810G Compliance
•	455mAh battery with up to 25 days of battery life, 100hours with GPS outdoor mode
အနက်၊ အဖြူနဲ့ အပြာရောင်တွေ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ၂၅၀ ယူရို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မြန်မာငွေ ၃ သိန်း ၉ သောင်းလောက်ရှိတဲ့အတွက် စွမ်းရည်မြင့်သလို ဈေးကလည်း လန်းပါတယ်။ ၇ ရက်နေ့ ဥရောပမှာ ရောင်းမှာပါ။
AnTuTu မှာ စွမ်းရည်အမြင့်ဆုံး ဖုန်း ဖြစ်လာတဲ့ Xiaomi Mi 10 Ultra